juillet 2019 · déliremadagascar
Archives mensuelles juillet 2019
Socio-eco	 31 juillet 2019 R Nirina
MADAGASCAR ATBC 2019 : Fihaonaben’ireo mpikajy ny tontolo iainana
Loza mihatra amin’izao tontolo izao ny fahasimban’ny tontolo iainana. Miezaka ny rehetra ny tokony atao amin’ny fomba afahana mikajy izany. Continuer la lecture →
Sport	 26 juillet 2019 R Nirina
CHAN: Vonona ny handresy ny Barea
Nampahafantarina androany 26 jolay 2019 ny lisitr’ ireo mpilalao 23 mandrafitra ny Barea hifandona amin’ny ekipam-pirenena mozabikanina, etsy Mahamasina ny alahady 28 jolay 2019 ho avy izao. Raha ny vaovao voaray dia hisokatra amin’ny 7 ora maraina ny vavahadin’ny kianjaben’i Mahamasina amin’io fotoana io. Nivelatra ny klioba 16 manerana an’i Madagasikara no nangalàna ireto mpilalao ireto hoy ny mpanazavatra, Maître Franklin. Iray volana no nanaovan’ny ekipam-pirenena malagasy ny fanomanan-tena ka efa vonona na ara-tsaina na ara-batana na ara-teknika izy ireo hiatrika ny lalao fifanintsanana amin’ny CHAN ny alahady izao io. Nampanantena ny kapiteny Ando fa vonona handresy ny ekipam-pirenena mozabikanina ny Barea ary hiezaka hiaro ny voninahitr’i Madagasikara tahaka nataon’ireo Barea tamin’ny CAN 2019 tany Egypte.
Ireto avy ny anaran’ireo mpilalao:
LEDA (Cnaps Sport)
JOMA (AS Jet Mada)
NINA (AS Adema)
TOBY (Cnaps Sport)
THEODIN (Fosa Juniors)
DA-TSIRY (AS Adema)
GAUCHE KELY (Zanakala)
ELEFONI (Fosa Juniors)
DAHERY (Fosa Juniors)
LALAINA (Cnaps Sport)
LOLODY (Fosa Juniors)
BAGGIO (Fosa Juniors)
ANDO (Cnaps Sport)
TSITO (AS Jet Mada)
ARNAUD (Cnaps Sport)
MIHARY (AS Jofama)
ROMY (Tia Kitra)
Marihina fa amin’ny herinandro ambony ny lalao miverina
Socio-eco	 26 juillet 2019 lynda
FESTIVAL THE WEEKEND: Ny zava-kanto sy ny fialamboly miaraka
Hihaona ao anatin’ny toerana iray ny mpankafy mozika sy ireo tia mialavoly na ankizy na lehibe. Ao anatin’ny telo andro dia ho hita mandritra “festival the WeekEnd” ny zava-kanto sy ny fialamboly isan-karazany. Continuer la lecture →
Sport	 24 juillet 2019 R Nirina
FIFIDIANANA FILOHA SY KOMITY MPANATANTERAKY NY FMF: Vao tsy manomboka akory ny lalao dia efa misy manao hosoka
Manana telo andro ireo kandida nametraka antonta-taratsay amin’ny fifidianana ho filoha sy komity mpanatanteraky ny federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF) hanaovana fampakarana raha tsy mahafa-po azy ny fanapahan-kevitra navoakan’ny komity mpikarakara ny fifidianana. Ao anatin’ny dimy andro kosa no handinihan’ny « Comité de normalisation » (CDN) izany ka aorian’izay vao havoaka ny lisitry ny kandida raikitra, izan hoe ny 01 aogositra 2019. Omaly 23 jolay 2019 tamin’ny 4 ora hariva no nampahafantarin’ny CDN ny lisitra vonjimaika an’ireo mpifaninana amin’ny fifidianana atao ny 24 aogositra 2019, any Ifaty Toliara. Raha ho an’ny kandida ho Filoha dia enina no nanatritra ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana. Ny dimy tamin’ireo nahazo taratasy avy amin’ny CDN fa nahafeno fepetra ny antonta-taratasin’izy ireo.
Ireto avy ny anaran’izy dimy mirahalahy voatazona: Andriamiasasoa Doda, Mohamad Abdillah, Arizaka Rabekoto Raoul, Rasoamaromaka Herilalaniaina ary Rakotomamonjy Neypatraiky. Tsy nanara-dalàna kosa ny faha-enina satria telo andro tao aorian’ny fetr’andro hanaterana dosie izy vao tonga nanatitra ny azy. Fanampin’izay tsy nahazo fankatoavana tamin’ny avy amin’ny filohan’ny ligy telo ny tenany.
Ho an’ny komity mpanatanteraka indray dia 37 ny kandida ka ny 30 tamin’ireo no voatazona.
Ny fito ambiny tsy nahafeno ny fepetra. Tao no tsy nahazo fankatoavana avy amin’ny filohan’ny ligy roa. Nisy tamin’izy ireo no nampiasa fitombokase sy sonia hosoka », hoy filohan’ny CDN, Atallah Béatrice. Ireo kandida avy any amin’ny faritra Ihorombe no nahatrarana izay. Rehefa nojerena ny fitombokasen’ny filohan’ny ligy dia ilay taloha no nipetaka tamin’ny antontan-taratasy kanefa efa niova io fitombokase io ka izay no nahafantarana azy fa hosoka, hoy hatrany ny filohan’ny CDN. Tsy hitory kosa anefa ny CDN fa anjaran’ny ligy voakasika ny manao ny fitorina raha tiany ny hanao izany.
Marihina fa iray no ho filohan’ny FMF ary 10 kosa ny komity mpanatanteraka. Ny CDN no hiantoka ny fandaniana rehetra ho an’ny mpifidy dia ny filohan’ny ligy miisa 22.
politique	 24 juillet 2019 R Nirina
ANTENIMIERANDOHOLONA : Zokin-dRafahaleovantena
Raha oharina amin’ny olona dia efa olon-dehibe nahazohazo taona ny Antenimierandoholona. 60 taona katroka no nisian’ ity andrimpanjakana ity teto Madagasikara. Continuer la lecture →
Socio-eco	 23 juillet 2019 R Nirina
SEMINERA « INVINCIBLE »: Ny lalana hizorana any amin’ny fahombiazana
90 % ny olombelona no tsy mahafantatra akory hoe iza marina izy, inona ny tena tanjony amin’ny fiainana, raha fanadihadiana manerantany. Continuer la lecture →
Socio-eco	 20 juillet 2019 R Nirina
TEMPOLY ANATIROVA: Hifanesy handalo eny ireo fiangonana isan-karazany
Feno 150 taona ny nanorenana ny tranovato Anatirova Manjakamiadana. Nosokafana tamin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ny sabotsy 20 jolay 2019 ny fanombohan’ny fankalazana. Continuer la lecture →
Socio-eco	 19 juillet 2019 lynda
HOPITALY KOKILABEN: Eric Fou Hehy, olom-baovao
Vita soamantsara ny famindrana voa sy aty natao tamin’i Eric Fou Hehy. Efa manomboka mihatsara ny fahasalamany amin’izao fotoana izao, raha ny fanazavan’ny solontenan’ny hopitaly Kokilaben Dhirubhai Ambani eto Madagasikara Sunel Kumar. Continuer la lecture →
Socio-eco	 18 juillet 2019 R Nirina
KIMIA COSMETICS MADA: Marika tena izy ny “produits cosmétiques” ao
Zava-doza ho an’ny fahasalaman’ny mpanjifa ny fividianana ireo vokatra ampiasaina amin’ny fikojakojàna ny endrika amam-bika (produits cosmétiques) hosoka. Continuer la lecture →
politique	 17 juillet 2019 lynda
Mbola naverin’ny solombavambahoaka zokiolona indrindra tamin’ny fivoriana manokana natao teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza omaly 16 jolay 2019 fa mila averina amin’ny laoniny ny hasin’ny Antenimierampirenena. Continuer la lecture →